PSJTV | विदेशी बुहारीले कति समयपछि नागिरकता पाउँछिन् ?
विदेशी बुहारीले कति समयपछि नागिरकता पाउँछिन् ?
मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडौं : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला(बुहारी)ले कति समयपछि नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् भन्ने विषय विवादित बन्दै गएको छ।
यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अझै सहमति जुटेको छैन। संविधानले विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर समय कानुन बनाएर तोक्ने भनेको छ। संविधानको धारा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विदेशी बुहारीलाई कति समयभित्रमा अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्थामा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ। समितिका केही सदस्यले भने विदेशी बुहारीलाई कम्तीमा सात वर्षदेखि १० वर्षको समय तोक्नुपर्ने बताएका छन् भने केही सदस्यले तुरुन्तै दिनुपर्ने बताएका छन्। संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएका कारण विदेशी महिलालाई नेपालको बुहारी बन्नासाथ नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरमका रामसहायप्रसाद यादवले बताए। उनले भने तुरुन्तै नागरिकता दिनका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था राख्न सकिने उनले बताए।
नागरिकता छ भने त्यागेको घोषणा गर्ने र नागरिकता छैन भने छैन भन्ने घोषणा गरेपछि विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न सकिने उनले बताए। ‘बरु दण्ड सजाय कडा गरौं नागरिकता जटिल नबनाउँ भन्ने भनाइ हो’ उनले भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
कर्मचारीहरू विभिन्न कार्यक्रमको मेलोमेसो मिलाएर विदेश भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो एक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा धेरैले विदेश भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसमा पनि चीन भ्रमण गर्नेको संख्या ...